Tag: brand mukurumbira | Martech Zone
Tag: brand mukurumbira
Nekuuya kweye ratidziro dzebhizinesi, wongororo dzepamhepo, uye midhiya enhau, yako kambani kambani rutsigiro rwevatengi zvino rwasangana nemukurumbira wechiratidzo chako uye neruzivo rwevatengi pamhepo. Kutaura chokwadi, hazvina basa kuti kushambadzira kwako kwakakura sei kana rutsigiro uye ruzivo zvichishayikwa. Chiratidzo chekambani chakafanana nemukurumbira wemunhu. Iwe unowana mukurumbira nekuyedza kuita zvakaoma zvinhu zvakanaka. Jeff Bezos Ndivo vatengi vako uye vako